Al-Shabaab oo deegaanka Yaaq-bari weyne gubtay - Caasimada Online
Home Warar Al-Shabaab oo deegaanka Yaaq-bari weyne gubtay
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay weerar xun ku qaadeen deegaanka Yaaq-bari weyne oo ka tirsan gobolkaasi oo dhaca Koonfur Galbeed Somalia.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya inay bas-beeleen guryo fara badan oo ay daganayeen dad shacab ah, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sidoo kale Caasimada Online u sheegay in arrintan ay ka dambeysay, kadib markii ay dadka deegaanku taageero u fidiyeen maleeshiyaad beeleed abaabulan oo dagaal kala hortegay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab.
Ma jiro wax khasaare ah nafeed ah oo ka dhashay dhacdadan, marka laga reebo gubashada deegaanka Yaaq-bari weyne ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Xaaladda ayaa haatan mid kacsan, mana jiro wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan falkaasi.